Wiilkii walaashiis u dilay sawirro ay soo dhigtay Facebook oo la xukumay | Baahin Media Warka Somalia iyo Somalida
ARIMAHA BULSHADA Wiilkii walaashiis u dilay sawirro ay soo dhigtay Facebook oo la xukumay
Wiilkii walaashiis u dilay sawirro ay soo dhigtay Facebook oo la xukumay
Xiddigtii baraha bulshada Pakistan Qandeel Baloch walaalkeed ayaa lagu riday xukun xabsi daa’in ah, saddex sano ka dib dilkeeda.
Waseem wuxuu qirtay inuu ceeji ku dilay Ms Baloch, oo 26 jir ahayd bishii July ee sanadkii 2016. Xilligaas wuxuu sheegay inuu u dilay maadaama ay xiddigtaas ceeb usoo jiidday qoyska.
Waxaa lagu soo warramay inuu ka carooday ay soo dhigtay baraha xiriirka bulshada.
Maalintii Jimcada ayey maxkamad ku weydisay dambiyada la xiriira dilka gabadhaas, waxaana dadkaas ka mid ahaa wadaad diimeed lagu magacaabo Mufti Abdul Qavi.
Ms Baloch qoyskeeda waxay markii hore farta ku fiiqeen wadaadkaas, iyagoo sheegayay inuu dhiirrigaliyay dilka ka dib markii bil ka hor dhimashadeeda gabadha lagu eedeeyay inay iska qaadday sawirro ayna soo galisay baraha bulshada.
Hase yeeshee isagu mar walba wuu iska fogeynayay inuu ku lug lahaa dilkeeda.
Walaalkeed Waseem waxaa u furan inuu racfaan ka qaato xukunka lagu riday.
Qareenkiisa oo lagu magacaabo Sardar Mehmood ayaa wakaaladda wararka ee AFP u sheegay inuu rajo fiican ka qabo in Waseem Baloch “ay dacwaddiisa laali doonto maxkamadda sare”.
Wiil kale oo la gashay gabadhaas, oo isagana la yiraahdo Arif ayey maxkamaddu sheegtay inuu qeyb ka leeyahay dambiga la xiriira dilka Ms Baloch.
Sidee looga falceliyay xukunka?
Maxkamadda uu fadhigeedu yahay magaalada Multan, waxaa ka dhacay dabaaldagyo loo sameeyay eedeysaneyaasha dambiga lagu waayay, iyo oohin loogu baroor diiqay xukunka lagu riday wiilka.
Lahaanshaha sawirkaAFPImage captionMufti Abdul Qavi, oo ka muuqda dhinaca midig waxaa laga bariyeelay eedeynta dilka ah
Sawirro lasoo galiyay baraha bulshada ayaa muujinayay Mufti Qavi oo ubaxyo lagu dul daadinayo ka dib markii uu maxkamadda ka baxay isagoo dacwaddiisa la laalay, taageerayaashiisa ayaana aad u faraxsanaa.
Dhinaca kalena, Ms Baloch hooyadeed ayaa u ilmeyneysay wiilkeeda lagu xukumay xabsi daa’inka.
“Wax dambi ah malaha”, waxaa sidaas wariyeyaasha ku tiri Anwar Mai ka hor inta aanan xukunka lagu dhawaaqin. Iyada iyo seygeedaba waxay bishii lasoo dhaafay isku dayeen inay wiilkooda sii daayaan, waxayna sheegeen inay wiilkooda u cafiyeen dilkii uu u geystay walaashiis.
Lahaanshaha sawirkaAFPImage captionWaseem waxay maxkamaddu ku xukuntay xabsi daa’in
Tumay ahayd Qandeel Baloch?
Qandeel Baloch waxay ahayd haweeneydii ugu horreysay xiddigta ka noqotay baraha xiriirka bulshada ee dalka Pakistan. Magacii loo bixiyay markii ay dhalatay wuxuu ahaa Fouzia Azeem, waxayna kasoo jeeday qoys sabool ah oo daggan magaalo qiyaastii 400km (248 miles) dhinaca koonfurta-galbeed ka xigta magaalada Lahore.
Inta badan waxaa lagu tilmaami jiray inay inay Kim Kardashian-ta dalka Pakistan.
(Kim Kardashian, waa gabar wariye ah oo caan ka ah dalka Mareykanka, oo u doodda xuquuqda dadka kale).
Ms Baloch waxay boqollaal kun oo taageere ku lahayd baraha bulshada, waxayna soo bandhigi jirtay sawirro iyo muuqaallo ay qaarkood ku heeseysay.
Arrintaas waxay ku burburisay dhaqanka adag ee dalka Pakistan, kaasoo mamnuucaya in gabadhaha ay sawirradooda oo aan asturneyn muujiyaan.
Markii ay soo caan baxday ka dib waxaa qandaraasyo lagu siin jiray inay bogaggeeda baraha bulshada ku xayeysiiso wax soo saar ay shirkado sameeyaan.
Markii si weyn loo bartay sanadkii 2014-kii, waxaa soo baxayay warar sheegaya in la guursaday iyadoo aad u da’ yar ayna cunug leedahay.
Lahaanshaha sawirkaAFPImage captionQandeel Baloch
Hase yeeshee awood uma aysan lahayn inay cunugeeda koriso, waxayna u celisay qoyska seygeeda, kaasoo mar walba beenin jiray inuu si xun ula dhaqmay iyada.
Sanadkii 2015-kii waxay ka mid noqotay 10-ka ruux ee magacyadooda loogu raadiska badan yahay Google-ka ee dalka Pakistan.
Markii ay sii wadday inay muuqaallada muranka dhalinaya soo galiso baraha bulshada, la taliyaheeda dhinaca Internet-ka ayaa uga digay inay xaalad xun lugaha lasii galeyso.
Junaid Qasi wuxuu wargeyska the Guardian u sheegay inay warkiisa dhag jalaq u siinin.
Previous articleXOG: Galmudug oo yeelanaysa labo Guddi doorasho iyo Khilaaf cusub oo bilowday
Next articleXOG:Kenya oo Dalbaneysa arin dowlada Soomaaliya iyo shacabka soomaaliyeed ogolaan doonin oo kusaabsan..
Haweeney “ka been sheegtay” hantideeda oo laga saaray liiska maalqabaneedda
Gabdho ay qoyskooda dileen kaddib markii lagu dhex arkay muuqaal baraha bulshada ku baahay
Aabe xal cajiib ah u helay Wiilkiisa oo lagu kari waayay in uu guriga joogo ! (Daawo Sawirro)
Yaa carruurta u wanaagsan in ay barbaariso hooyo kulkulul iyo hooyo miskiin ah?
Daawo:Xaaskii Jamal Khashoqji oo waraysi kudhex sheegtay arin kale oo murugo leh xiliga oo safaarada oo galaaye
Sidey Al Shabaab ku dileen Taliyihii Sirdoonka degmada Garbahaareey ?
XOG XASAASI AH: Itoobiya oo Amar kusoo Rogtay Madaxweyne Axmed Madoobe..
DHAGEYSO:Dagaalka Kaxandhaale Oo Lagu Eedeyay Madaxweyne Xaaf & Sirta Ka Danbeysa Oo La Ogaaday
Toos Udaawo:Gudoomiyaha barlamaanka oo xiligaan la hadlaayo warbaahinta asagoo ka hadlaayo…